ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (84)အာရှနွယ်ဖွား ရှေ့ နေရဲ့Amazing Performance
5 stars ပေးပြီး။5ခေါက်လောက် ပြန်ကြည့်မိလို့ 
်!!!! FIRST AUDITION!!!!
့!!!!!SEMI FINAL REVEALED!!!!!
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, September 27, 2009